saddexaad Jarmal kasta aragto cryptocurrencies sidii maalgashi - Blockchain News
Inkastoo Seeraar, Ethereum iyo Co. adag ayaa ka dhacay hoos u dhaca qiimaha dhawaan, ay caan sameeyey yar si ay u waxyeelayn. Wadar ah 29 boqolkiiba muwaadiniinta Jarmal arki lacagta digital sida maal xiiso leh. Baadhitaanka ayaa wakiil ee macnaha guud ee ku Postbank Digital Study 2018 ka dhacay inta u dhaxaysa dhamaadka February iyo dhammaadka March, ie isla markiiba ka dib qiimaha mararka qaarkood aad u af badan ku dhacaa ee lacagaha digital. Khaas ahaan, madaxbannaanida nidaamyada dhaqaale sharciyeed iyo rajada of celinta sare isticmaali jiidashada weyn ee Jarmalka. Xiisaha mid ah Jarmalka yar oo dijital ah affine waxaa si gaar ah loogu dhawaaqaa. In da'da u dhaxaysa 18 iyo 34, ku dhawaad ​​in ka mid ah labada (46 boqolkiiba) waxaa xiiseynaya sida maalgelinta ee cryptocurrencies – inkastoo ay wararka inta badan taban.
joogitaanka Media kordhisaa xiisaha Seeraar iyo Co
Sanadkii la soo dhaafay, heerka cryptocurrency ka mid record sare booday ku xiga, laakiin tan iyo dhamaadka 2017, qiimaha Seeraar, ka cryptocurrency ugu ballaaran loo isticmaalo, ayaa dhacday ka badan 65 boqolkiiba. Warbaahinta ballaadhan loogu sheegay ee isbedbedelka qiimaha iyo wakiillo badan warshadaha digniin culus hadlo; sida Bundesbank Deutsche ama Authority Jarmal ilaalinta dhaqaalaha ee Bafin. The codadka khubarada, kuwaas oo saadaaliyay kacaan ganacsi maalgashi ah by cryptocurrencies, sidoo kale wuxuu noqday wax badan ka aamusan.
“Waxaa xusid mudan in kooxda Jarmalka ay weli xiiseyneyso sidii maalgashi dhaqaale inkastoo khasaaraha sare iyo halista cad in cryptocurrencies,” ayaa sheegay in Dr. Thomas yaraanta, Postbank Chief Sarkaalka Digital. “Dhab ahaan waxaa jira halis dhab ah in dadka lumin doonaa lacag kaliya sababtoo ah waxay raacaan Crore ah.” Seeraar wuxuu ahaa cryptocurrency ugu horeysay ee 2009, iyo hadda waxaa jira in ka badan 1,500. maamulka xogta baahsan iyo hab-cryptographically xaqiijisatay abuuro xawaalad lacag bixinta digital aan maamulka dhexe sida bangiyada.
Haweenka waxaa kaabayaasha habka madax-bannaanida, dad baa soo ag fursadaha soo laabtay
Waxaa si gaar ah waa madaxbannaanida nidaamyada dhaqaale in fascinates Jarmalka ku saabsan cryptocurrencies. Qaybta Tani waa si weyn u badan oo muhiim u ah haweenka (60 boqolkiiba) badan ee ragga (51 boqolkiiba). rajada The of celinta filayo sare, dhanka kale, gaar ahaan waxay cuncun nin (56 boqolkiiba marka la barbardhigo 36 boqolkiiba dumarka). Waayo, taageere kasta oo saddexaad oo cryptocurrencies, magaciisa kale oo muhiim ah. Si ka duwan, tusaale ahaan, saamiyada shirkadaha, Maal shakhsiga ah ma aha oo xiiso leh. Iyada oo hanti ahaan jirka ah ee cryptocurrencies jirin shaqaale bangi ama Somailand ayaa aragti saldhig ah. Waayo, qof kasta oo shanaad xiiso, sidoo kale waxaa jira sababo dareen sida thrills iyo “dareen digger dahab ah” ee maal foom cusub ee maalgashiga digital.
Soo jiidashada leh dadka dhalinyarada ah gaar ahaan waa weyn
Tallaabada inay maalgashi la sameeyo si gaar ah by dadka dhallinyarada ah. At lix boqolkiiba, Oo barbariyiintiina digital leeyihiin cryptocurrencies labo jeer sida ugu badan dadka celceliska. In laba iyo tobanka bilood ee soo socota, kale 14 boqolkiiba 18- 34-sano jirka ah ayaa weli doonaya in ay koraan cryptocurrencies. Guud ahaan kooxaha da'da oo dhan, tani tahay oo kaliya sideed boqolkiiba. “Inkastoo ay soo jiidashada oo dhan, maalgashadayaasha yar yar waa in aan waayi arkaan dalabyo ka helay nidaamka bangiyada aasaasay. Qof kasta oo hore u dhigaysa maalgelineed ee securities sida maalgelinta waa hubaal ma ay maal-cryptocurrencies sababtoo ah khatarta sare ku lug. Maxaa yeelay, noocan ah ee maal-gashiga waa heer sare kuteen, “sii Thomas Mangel.
Aqoonta ku saabsan fursadaha iyo halisaha waxaa laga yaabaa in quudhsan
The isbedbedelka qiimaha sare ee cryptocurrencies iyo sidoo kale qorshayaasha by xisaabtaaysa kooxaha ama xataa in la dhiso dal cryptocurrencies iyaga u gaar ah ayaa keentay in saxaafada baahsan. Natiijada daraasadda ayaa tilmaamaya in joogitaanka warbaahinta waxay keenaysaa badan Jarmalka in ay ku tirinnaa in ay bartaan cryptocurrencies – maxaa yeelay, iyagu hore u akhriyin ama maqlay wax badan oo ku saabsan. 20 boqolkiiba Jarmalka isu cadeynayaa aqoon fiican ama aad u wanaagsan oo cryptocurrencies. The barbariyiintiina digital dareemaan sii ammaan dhulka ku: 29 boqolkiiba 18- 34-sano jirka ah isu fiirsan “connoisseurs crypto”.
“Sababo la hypes warbaahinta, dad badan oo ay qiimayn dheeraad aqoontooda fursadaha iyo halisaha cryptocurrencies sidii maalgashi,” digtay Thomas Mangel. Tusaale ahaan, badan ma oga in faa'iidada laga cryptocurrencies u baahan tahay in si buuxda loo qoro haddii aan hayo sano ugu yaraan a. Iskusoo wada duuboo, halista ee wadarta khasaaraha, taas oo aanu jirin maalgelinta kale ee foomkan, lama siiyo tixgelin ku filan. Qof kasta oo jeclaan lahaa in ay maal-cryptocurrencies, si kastaba ha ahaatee, waxaa lagula talinayaa in ay dooran oo keliya lacag inay samayn karaa iyada oo aan.
Macluumaadkii hore ee Digital Postbank ka Study 2018 – Jarmal Digital iyo Lacagta
In muddo ah ka February si ay u March ee sannadkan, 3,100 Jarmalka ayaa lagu waraystay for Digital Postbank ka Study 2018 – Jarmal Digital iyo Lacagta. Waayo, markii afaraad oo isku xigta, Daraasad Postbank ee baarayaa horumar la baxaya ee meelaha kala duwan ee nolosha Jarmal ee la xiriirta digitization ee mawduucyada guud iyo mid dhaqaale, gaar ahaan. In si ay u muujinayaa qaab-dhismeedka dadweynaha wakiil, muunad la miisaamaa gobolka (proportionalization), da'da iyo jinsiga. file tixraaca ayaa waxaa ku salaysan Tirakoobka 2011 Xafiiska tirokoobka Federaalka. Natiijada waxaa lagu soo koobay in tiro idil. Duwanaanta in wadaruhu lagu macnayn karaa by kala duwan buuxinta.
Japanese Fariin g ...
sarrifka crypto Canadian Coinsquare kicisaa $ 30M
Kylie Terrezza ayaa sheegay in:
Celesta ayaa sheegay in: